तपाईंको छालामा प्रदूषण - यसले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ? | बेजिया
तपाईंको छालामा प्रदूषण: यसले कसरी असर गर्छ?
सुसाना Godoy | 09/05/2022 10:00 | सुन्दरता
हामी सधैं जोड दिन्छौं कि हामीले राम्रो छाला हेरचाह गर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले यसलाई क्षति पुर्याउन सक्छ र हो, तपाईंको छालामा प्रदूषण ती मध्ये यो एक हो। यद्यपि हामीले स्पष्ट हुनुपर्दछ कि यसले छालालाई मात्र असर गर्दैन तर शरीरलाई, विशेष गरी फोक्सोलाई पनि असर गर्न सक्छ।
तर सायद त्यो पहिले नै ठूला चीजहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ र हामी तपाइँको छालामा के प्रदूषण छोड्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछौं, जुन सानो छैन। केही देखि यसको नतिजा छिटो वा बढी स्पष्ट र अन्य दीर्घकालीन रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो सबैले तपाईको नाजुक छालालाई कसरी असर गर्छ जान्नुहोस्!
1 छालाको एन्टिअक्सिडेन्ट कम गर्छ
2 सुक्खापन निम्त्याउँछ
3 थप मुँहासे
4 झुर्रियाँ को उपस्थिति
5 अधिक जलन वा rosacea छाला
छालाको एन्टिअक्सिडेन्ट कम गर्छ
जब हामी तपाईको छालामा हुने प्रदूषणको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौं सवारी साधनबाट आउने ग्यासहरू, साथै धुलो वा हावा आफैं। त्यसैले तिनीहरू सिधै हाम्रो छालामा पुग्छन् र यसले यसको एन्टिअक्सिडेन्ट घटाउन सक्छ।। तीमध्ये हामी भिटामिन सी वा ई हाइलाइट गर्छौं। पहिलोले यसको अधिकतम ख्याल राखेकोले, समय भन्दा पहिले बुढ्यौली रोक्न, यो कोलाजेन उत्पादन गर्न पनि आवश्यक छ भनेर बिर्सनु बिना। जबकि दोस्रो जालले हाम्रो छालालाई नोक्सान पुर्‍याउने फ्री रेडिकलहरू बनाउँछ। त्यसोभए यदि यो दुर्लभ छ भने, यो हाम्रो छालाको लागि धेरै सामान्य छ। अब अलिकति बुझौं!
पक्कै पनि केहि अवसरहरूमा तपाईंले यो याद गर्नुभएको छ र तपाईंले यो के कारणले गर्दा राम्रोसँग थाहा छैन। ठिक छ, हामीले यस तथ्यको बारेमा कुरा गर्नै पर्छ कि, सामान्य नियमको रूपमा, तपाईंको छालामा हुने प्रदूषण यसको सुक्खापनबाट देख्न सकिन्छ। तसर्थ, बिहान र बेलुका दुबै समयमा अनुहार राम्रोसँग सफा गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। उक्त सफाईबाट, हामी राम्रो मोइस्चराइजिंग क्रीम प्रयोग गर्नेछौं। हाम्रो अनुहारमा कसरी लोच फेरि उपस्थित छ भनेर हेर्न सक्षम हुन। अवश्य पनि आफैंमा क्रीमहरू बाहेक, प्राकृतिक वा घरेलु उपचारहरू रोज्ने जस्तो केही छैन। जहाँ मह, एभोकाडो वा केरा जस्ता सामग्रीहरू उपस्थित हुनेछन्, किनकि ती सबैले थप हाइड्रेशन थप्छन्, जुन हामीलाई चाहिन्छ।
यद्यपि यो सत्य हो कि सुख्खापन तपाईंको छालामा प्रदूषणको एक समस्या हो, कहिलेकाहीँ sebum मा वृद्धि हुन सक्छ। तसर्थ, यो वृद्धिले छिद्रहरूमा थप फोहोर निम्त्याउनेछ र यसको परिणामस्वरूप पिम्पलहरू देखा पर्नेछ। त्यसैले फेरि हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ कि छालाको हेरचाह सबैभन्दा आधारभूत कुरा हो। यस कारणको लागि, हामीले थप्नु पर्छ कि हप्तामा एक पटक, तपाईंले एक्सफोलिएशन गर्न आवश्यक छ, किनकि यस तरिकाले, हामी मृत कोशिकाहरूलाई बिदाइ गर्नेछौं।
झुर्रियाँ को उपस्थिति
पक्कै पनि तपाईंले पहिले नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने वास्तवमा जब हामी प्रदूषणको कारणले हुने सुख्खापनको साथसाथै भिटामिनको कमीको बारेमा कुरा गर्छौं, परिणामको रूपमा हामीमा झुर्रियाँ हुन्छ। छाला धेरै कडा हुनेछ र यसैले, अभिव्यक्ति रेखाहरूले थप चिन्हित झुर्रियाँहरूलाई बाटो दिनेछ। यसो गर्नको लागि, हामीले डे क्रिम वा सीरम लागू गरेर तिनीहरूलाई रोक्नै पर्छ जुन हाम्रो अनुहारमा उज्यालो र निस्सन्देह, कोमलता फर्काउन जिम्मेवार छ।
अधिक जलन वा rosacea छाला
यस अवस्थामा, यो भनिन्छ कि rosacea विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ, तर ती सबै भित्र, प्रदूषण पनि मुख्य मध्ये एक हो। अनुहारभरि रातोपन देखा पर्न सक्ने घाम, हावा वा आर्द्रताको कारणले पनि हुन्छ। आफ्नो अनुहार राम्ररी धुनुहोस् तर धेरै चिसो वा धेरै तातो साबुन वा पानी प्रयोग नगर्नुहोस्। सन प्रोटेक्सन भनेको अर्को क्रिम हो जुन तपाईंले हरेक दिन ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि प्रदूषणले तपाईको छालालाई कसरी असर गर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » तपाईंको छालामा प्रदूषण: यसले कसरी असर गर्छ?
आफ्नो पोशाकमा जीवन्त र ट्रेंडी रंगहरू समावेश गर्नुहोस्